Somaliland News - Been-abuuradka fadeexadeysan Saylac.com iyo Harawo.com
Been-abuuradka fadeexadeysan Saylac.com iyo Harawo.com
17 Aug, 2009 - HARGEISA - Waxaa dhawaan lagu shaaciyey qoraal been abuurad ah oo lagu tilmaamey iney soo diyaarisey inantan sawirkeedu kor ka muuqdo, magaceedana lagu sheegay Luul Cilmi. Qooraalkani oo laga dhigey inay gabadhani qortay, ciwaankana looga dhigey �Fugucle rag (Faysal Ali Waraabe) iyo Fadhiyare geel (Silaanyo)�. Qoraalkani oo aflagaado iyo fadeexad aaney muteysan u soo jeediyey labada hogaamiye xisbi-qaran ee kor kuxusan.
Waxaase soo ifbaxdey in aanay inantani sal iyo raadtoona ku lahayn soomaalinino oo ay ka soo jeedo isir ahaan dalka Mauritania ee waqooyiga africa.
Inantani oo magaceeda dhabta ah layidhaa Huda waa gabadh u dhalatey wadankan Mauritania waxaaney dagen tahey wadanka Mareykanka (USA). waxaana sanadkii ina soo dhaafay lagu martiqaaday Oprah Winfrey Talk Show. Faahfaahintii waraysigaa fadlan riix xidhiidhka hoos ku qoran;
Waxase nasiib daro noqotey in qoraalkani uu yahey mid ku soo baxey website yada Saylac.com iyo Harawo.com oo labaduba mudooyinkani dambe ku caan baxey qoraalo aan sal iyo raad toona laheyn sida baaqyada siyaasadeysan ee dadka laga been abuurto iyo wararka ku tirikuteenka ah, taas oo xatta dhawaanaha danbe ay cabashooyin badan ka soo yeedhaysay akhristayaasha saylac.com oo ay ka codsanayaan shabakada inay ka waantawdo beenta dhagahooga ka bada tahay iyo in sidoo kale ilaaliso sumcada iyo anshaxa saxaafadeed
Waxa la yaable oo la iswaydiinayaa shabakadu ma waxay gobolka dhan ee Awdal ka waydey gabadh lagu qariyo ninka qoraaga is qariyay ah ee magaciisa ku sheegay luul cilmi!!!!!!. Ta kale se maxey moodayaan dadka reer Somaliland (ama se Somalia) ee akhrisanaya qoraaladani inaaney garaneynin sawirada lagala soo baxayo Google Images!
Iyadoo baryahan danbe dhagaheena ay ka badatay budhcadbadeedka soomaliyeed ee dhacda maalka aduunka ee badaha dhex jibaaxaya, tanina waxa lagu tilmaami karaa budhcadnimada cusub ee ay hormoodka ka yihiin saylac.com iyo harowo.com oo ay beegsanayaan muuqaalada qurxuun ee hablaha aduunka oo malaha abtirsiina looga dhigayo Awdal.
Nin carbeed ayaa hore u yidhi (haddii aad xishoon waydo, waxaa doonto yeel). Dadka hablihii reer Mauritania ka dhigay reer Awdal, la yaab ma laha inay sheegtaan degaamada goboladda jaarka ay yihiin ee Gabiley iyo Maroodi Jeex.
London « Prev item - Next Item »